कोरोनाको त्रासमा कालो बजारी - नेपालबहस
कोरोनाको त्रासमा कालो बजारी
| १२:५७:५९ मा प्रकाशित
२७ फागुन, काठमाडौं । मुलुकमा जब संकट निम्तिन्छ त्यसको सामना गर्न समुच्च राष्ट्र एकजूट हुनेगर्छ । न त्यहाँ कुनै वादले काम गर्छ, न कुनै जात वा धर्मको दरकार पर्छ । आसन्न संकटबाट पार पाउन सबैको एकै उद्येश्य र लक्ष्य हुन्छ । यो विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार्य सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो । यस्तै संकट अहिले संसारभर फैलिएको छ ।
नोबेल कोरना भाइरसले विश्वका चारहजार भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको छ । चीनको बुहानबाट फैलिएको यो भाइरस अहिले संसारका एक सयभन्दा बढी देशमा फैलिएको छ । इटाली र इरानमा पछिल्लो पटक आतंक फैलिएको छ । यसको सामना गर्न सबै एकजुट भएका छन् ।
नेपालमा समेत यसको त्रास फैलिएको छ । अहिलेसम्म केवल नेपालमा एकजनालाई मात्र कोरोना भाइरसको संक्रमण फेला परेको छ । त्यो पनि अहिले निको भइसकेको अवस्था छ । त्यसैले धेरै आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेपनि सचेत हुनुपर्ने चाहीँ पक्कै पर्छ ।
राष्ट्रिय विपतका बेला सबैले सहयोग गर्ने मान्यतालाई नेपालमा ठीक उल्टो ढंगले लिने गरिन्छ । संकटलाई व्यापारी भने कमाउने अवसरका रुपमा लिने गर्छन् । जब संकट आइपर्छ, नेपालमा काला बजारियाको बिगबिगी नै हुनेगर्छ । अहिले कोरोना संत्रासका बेला व्यापारीले त्यस्तै व्यवहार सुरु गरेका छन् ।
बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव सुरु भएको छ । सरकार सबै ठीक छ भन्छ, तर बजारमा केही पाइन्न । पाइहाले पनि दोब्बर मूल्य तिर्नुपर्ने वाध्यता छ । जनताले बजारमा हरेक सामानको नयाँ मूल्यसूची देख्न पाएको अवस्था छ । खाद्यान्न मात्र होइन, औषधि र ग्याँसको कृत्रिम अभाव जताततै छ । १० रुपियाँ पर्ने मास्क अहिले हाक्काहाक्की ५० रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ ।
जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुने अवस्थाको चित्रण भइरहेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको पर्यटन व्यावसाय चौपट भइसकेको छ । मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र सुनसान छन् । बुकिङ भएका होटलको अकुपेसन धमाधम रद्ध भइरहेको अवस्था छ । धेरै नेपाली युवा काम गर्न जाने श्रम मुलुकहरुले नेपालीलाई प्रवेश निषेध गरेको छ । जसले गर्दा नेपाल भित्रने रेमिटेन्स अब घट्ने निश्चित छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने छ ।
संकटका बेला व्यापारीले पनि मानवीय मूल्य मान्यतालाई अंगिकार गर्नु पर्छ भन्ने चेत कहिले आउला ? चारबर्ष अघिको अवस्था अहिले नेपाली उपभोक्ताले बेहोर्न थालेका छन् । भूइँचालोपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीका बेला एक सिलिण्डर ग्यासँ लिन मानिसले उठाएको कष्ट अहिले दोहरिन थालेको छ । अगुुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्कँदा तर्सन्छ भने जसरी नागरिक चाहिने भन्दा बढी जोहो गर्न हतारिएका छन् ।
अनावश्यक रुपमा उपभोग्य सामग्री थुपार्ने होडबाजी नै सुरु भएको छ । त्यसैको फाइदा व्यापारीले उठाएका हुन् । यस्तो अवस्था आउनुमा सरकारको लाचारी र गैरजिम्मेवारी नै मुख्य कारण हो । सरकारप्रति जनताको भरोशा शुन्यमा छ ।
सरकारले कृत्रिम अभाव देखाएर बढी मूल्य असुल्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्ने त भनिरहेको छ । तर व्यवहारमा भने नागरिकले त्यस्तो अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । एक दुईवटा व्यापारीलाई कारबाही गर्न सक्यो भने बजार आफैं सही बाटोमा लम्कन्छ । केही मानिस खटाएर अनुगमन गर्ने सरकारी शैली आफैंमा दोषपूर्ण छ, अहिले संकटको घडीमा जनशक्ति थपेर भएपनि अनुगमन बढाइनु पर्छ ।
जनप्रतिनिधि र टोल विकास समिति जस्ता संयन्त्रलाई अनुगमन प्रकृयामा समेट्न सकियो भने मात्र प्रभावकारी परिणाम आउन सक्छ । संकटका बेला उपभोक्ता लुट्ने व्यापारीलाई कडा सजाय दिन सकियो भने धेरै हदसम्म यो समस्याले पार पाउन सक्छ ।
कोरोना भाइरसले नेपालमा प्रत्यक्ष असर नगरे देखिएपनि यसको दीर्घकालिन प्रभाव अवश्य पर्ने छ । जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुने अवस्थाको चित्रण भइरहेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको पर्यटन व्यवसाय चौपट भइसकेको छ । मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र सुनसान छन् ।
बुकिङ भएका होटलको अकुपेशन धमाधम रद्ध भइरहेको अवस्था छ । धेरै नेपाली युवा काम गर्न जाने श्रम मुलुकहरुले नेपालीलाई प्रवेश निषेध गरेको छ । जसले गर्दा नेपाल भित्रने रेमिटेन्स अब घट्ने निश्चित छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने छ । आगामी दिन नेपाली अर्थतन्त्रले ठूलै समस्या भोग्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले अहिलेको महासंकटको घडीमा सबै एकजूट भएर सामना गर्नुको विकल्प छैन ।
राप्रपाको केन्द्रीय महाधिवेशन स्थगित ६ मिनेट पहिले
पूर्वराजाले दिए शुभचिन्तक तथा आफ्नाे उपचारमा खटिने डाक्टर र नर्सलाई धन्यवाद १७ मिनेट पहिले
प्रतिष्ठित व्यवसायी घिमिरेले चीनबाट अक्सिजन सिलिण्डर लगायतका सामग्री ल्याउँदै २९ मिनेट पहिले
टीकापुरमा अक्सिजन सहयोग अभियान २२ घण्टा पहिले
वैशाखमा मात्रै डेढ लाखभन्दा बढी संक्रमित १६ घण्टा पहिले
लुम्बिनीमा एक हजारमा पीसीआर परीक्षण २२ घण्टा पहिले
माटोको ढिस्कोले पुरिएर आमा छोराको मृत्यु २१ घण्टा पहिले
नवनियुक्त मन्त्रीहरु शुभकामना आदान-प्रदान गर्दै २० घण्टा पहिले
ज्यानमारा भाइरसबाट प्रहरी असईको मुत्यु २ दिन पहिले
निर्माण आयोजनाका अक्सिजन सिलिण्डर दिन आह्वान ५ दिन पहिले
आधा दर्जन कम्पनीको शेयरमूल्य उच्च दरले वृद्धि, कुन कतिले बढ्यो ? २ दिन पहिले
संक्रमण बढ्दै गएपछि दश दिन निषेधाज्ञा थप ७ दिन पहिले
शीतलनिवासमा राज्यमन्त्री द्वयलाई शपथ २० घण्टा पहिले
पार्टीलाई जेठ २ फर्काउने कार्यदलमा ओलीले बादल रोजेपछि भाँडिएको थियो बैठक ५ घण्टा पहिले
गण्डकीमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक: चार दल २ दिन पहिले
अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकै राति संक्रमितको मृत्यु ४ दिन पहिले
कोरोना कहरबाट २०२१ मा एक करोड ३० लाखले रोजगारी गुमाउने प्रक्षेपण २ हप्ता पहिले
जनकपुरधाममा आइसोलेशन केन्द्र सञ्चालन २ हप्ता पहिले
नेपाल दूरसञ्चारसहित नौ कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक कमाए, प्रतिशेयरमूल्य कुनको कति ? ५ दिन पहिले
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्त कम्पनीको मुद्दती निक्षेपमा २० करोड लगानी गर्दै १ हप्ता पहिले
आज बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाइँदै ४ हप्ता पहिले
सैन्य सङ्गठनमा प्रतिकूल हुने कार्य नगर्न थापाको निर्देशन ३ हप्ता पहिले
सिन्धुपाल्चोकमा कोरोनाबाट एकको मृत्यु, प्रहरी उपरीक्षकसहित २६ संक्रमित २ हप्ता पहिले
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा थप सुधार १ वर्ष पहिले
पहिरो पीडितको पुनःस्थापना ओझेलमा ४ महिना पहिले
ज्योति विकास बैंकद्वारा कपडा बैंकको लागि वासिङ मेसिन प्रदान​ १ वर्ष पहिले
कर्णालीमा ६ महिने बालकसहित ५५ जनामा कोरोनाको पुष्टि ११ महिना पहिले
Advertise: advertis[email protected]